ज्योती मगरको नखुलेको पाटो, दुुईवटा विवाह को–सँग कहिले ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
ज्योती मगरको नखुलेको पाटो, दुुईवटा विवाह को–सँग कहिले ?
‘अविवाहित हुँ तर कुमारी छैन’
‘राम्रो केटा भेटियो भने विवाह गर्ने सोचाईमा छुु’
गायीका ज्योती मगरले विवाहको प्रशंग आउँदा हरेक अन्र्तवार्तामा यसै भन्ने गरेकी छन् । तर उनले दुुईवटा विवाह गरिसकेको खुलासा भएको छ । पहिलो विवाह अछाममा र दोस्रो विवाह रोल्पामा गरेको प्रमाण फेला परेको छ । अछामको वलिगाउँ घर भएका माधव रावलसँग आजभन्दा झण्डै १० बर्ष अगाडी काठमाडौं कोटेश्वरको मन्दिरमा विवाह भएको थियो । एउटा भेटपछि प्रेममा परेका रावल र मगरले कोटेश्वर मन्दिरमा विवाह गरेका थिए । विवाहपछि मगर रावलसँगै उनको जन्मघर अछाम समेत दुुई पटक पुुगेकी थिइन । सुरुमा सम्बन्ध राम्रै थियो तर पछि गीतसँगै कार्यक्रममा व्यस्त रहेपछि शंकाले सम्बन्ध विग्रीएको उनी निकटका एक सहयोगीले बताए ।
विवाहपछि कोटेश्वरमा छट्टुै बसिरहेका रावल र मगरबीच शंकाका कारण नै झगडा पर्न थालेपछि मगर कार्यक्रममा विदेश गएका बेला रावलले कोठा छाडेका थिए । त्यसपछि एक्लीएकी मगरले केहीमहिनापछि सम्बन्ध तोडेकी थिइन । रावल अहिले एउटा प्रतिष्ठित बैंकका जागिरे हुने । उनले अर्को विवाह गरिसकेका छन् । त्यसको केहीमहिना पछि मगरले रुकुुम घर भएका प्रेम बुढासँग विवाह गरेकी थिइन ।
विवाहपछि उनीहरु काठमाडौको बल्खुमा बस्ने गरेका थिए । सुरुमा सम्बन्ध राम्रो भएपनि बुढाले मगरको कार्यक्रम प्रस्तुतीमा चासो राख्न थालेपछि सम्बन्ध विग्रीएको थियो । पछि उनीहरु अलग बस्न थालेका थिए । अहिले गायीका मगर आफुु अविवाहित रहेको बताउने गरेकी छन् ।
लोक तथा दोहोरी मगरको चर्चा गीत भन्दा पनि उनको शरिर र उनले लाउने गरेका पहिरनबाट हुने गरेको छ ।
सम्भवतः उनी जति विवादित लोकगायिका अरु कोही छैन् । लोक गायिका भएर फिल्मका हिरोइनले भन्दा पनि छोटा लुगा लगाएको भन्दै उनको आलोचना हुने गरेको छ । त्यही कारण उनको पारिवारीक सम्बन्ध विग्रीदै गएको निकटस्थहरुले बताउने गरेका छन् ।